प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, लाभांश भने नदिने
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १८ औँ वार्षिक साधारणसभाको मिति र स्थान तय गरेको छ। कम्पनीको आज बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिकसाधारणसभा यही भदौ २६ गते कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालय पर्साको वीरगन्जमा बस्ने निर्णय गरेको हो। त्यसो त कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि...
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को चौथो त्रैमासमा खुद बीमाशुल्क १३.७४ प्रतिशतले घटेको छ। सोमबार सार्वजनिक वित्तीय विवरणअनुसार चौथो त्रैमासमा कम्पनीले खुद बीमाशुल्कबापत ३८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यस्तो आर्जन ४४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ रहेको थियो। समीक्षा अवधिमा...
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले लिलामीमा राखेको अवितरित हकप्रद सेयरमा खरिद आवेदन दिने आज सोमबार अन्तिम मौका रहेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण समूहतर्फको ५४ हजार ६३१ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलाममा राखेको छ। लिलाममा राखिएको सेयर खरिद गर्न आज बैंकिङ समयसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ। कम्पनीले गत फागुन...
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर आज सोमबार (साउन १२ गते)देखि लिलामीमा राखेको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण समूहतर्फको ५४ हजार ६३१ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलाममा राखेको हो। लिलाममा राखिएको सेयर खरिद गर्न यही साउन १९ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ। कम्पनीले गत फागुन १८ गतेदेखि असार...
– पूर्णप्रसाद मिश्र काठमाण्डौ । विश्वभर रहेका करिब एक अर्ब हिन्दू धर्मावलम्बीमध्ये वार्षिक एक प्रतिशत अर्थात् एक करोडलाई पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गराउने गरी पशुपति क्षेत्रको विस्तृत गुरुयोजना तयार पारिएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तयार पारेको अति महत्वकाङक्षी गुरुयोजना संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययनमन्त्री अध्यक्ष...
काठमाण्डौ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले अवितरित हकप्रद सेयर यही साउन १२ गतेदेखि लिलाम प्रक्रियामार्फत बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले सर्वसाधारण समूहतर्फको ५४ हजार ६३१ कित्ता अवितरित हकप्रद सेयर लिलाममा राख्न लागेको हो। लिलाममा राखिने सेयर खरिदका लागि साउन १९ गतेसम्म शिलबन्दी बोलपत्र पेस गर्न सकिनेछ। कम्पनीले गत...
पर्यटकीय क्षेत्र ठमेलका व्यवसायी र घरधनीबीच छ महिनादेखि एक वर्षसम्म ५० प्रतिशत घरभाडामा छुट दिने समझदारी भएको छ । पर्यटन क्षेत्रका २२ संस्थाले आज ठमेलमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी ठमेलका घरधनीसँग भएको सहमति अनुसार एक वर्षसम्म ५० प्रतिशत भाडा छुट दिने समझदारी बनेको जनाएका हुन् । कोभिड–१९ महामारीका कारण देशकै प्रमुख...
प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको हकप्रद फागुन १८ गतेबाट निष्कासन हुने
काठमाण्डौ । चुक्तापुँजी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्ना सेयरधनीहरुका लागि आगामी फागुन १८ गतेबाट हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले चुक्तापुँजी ६४ करोड १५ लाख २० हजार रुपैयाँको १०ः६ को अनुपातमा (अर्थात् विद्यमान १० कित्ता सेयरबाबर नयाँ ६ कित्ता सेयरका दरले) हकप्रद जारी गर्न लागेको हो...
रु. ७०० बढीको सेयर १०० मै पाउने अवसर छुट्ला नि !
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सले जारी गर्न लागेको ६० प्रतिशत हकप्रदका लागि बुक क्लोजको मिति तोकेको छ । इन्स्योरेन्सले माघ २७ गतेका लागि बुक क्लोज मिति तोकेको हो । यसको अर्थ प्रूडेन्सियलको हकप्रद सुरक्षित गर्न चाहनेले माघ २६ गतेभित्रमा सो कम्पनीको सेयर खरीद गरी सेयरधनी कायम भइसक्नुपर्नेछ । यो कम्पनीले १०० रुपैयाँ दरका ३८...
प्रूडेन्सियल र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स हकप्रद निश्कासन गर्दै, कसको कति ?
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्स र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले हकप्रद सेयर निश्कासन गर्ने भएका छन् । प्रूडेन्सियलको ६० प्रतिशत र गुँरास लाइफको सतप्रतिशत हकप्रद सेयर धितोपत्र बोर्डले हकप्रद निश्कासनको पाइपलाइनमा राखेको हो । प्रूडेन्सियलले १०० रुपैयाँ अंकित दरका ३८ लाख ४९ हजार १२० कित्ता हकप्रद निश्कासन गर्न चाहेको छ...
प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सको १७ औं साधारणसभा सम्पन्न
काठमाण्डौ । निर्जीवन बीमाको कारोबार गर्दै आएको प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सत्रौं वार्षिक साधारणसभा भदौ १ गते वीरगञ्जमा सम्पन्न भएको छ । सो साधारण सभाले सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्ष श्रवणकुमार अग्रवालद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत पारित गरेको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष...
प्रूडेन्सियलले विशेष साधारणसभा डाक्यो, एजीएम अझै अनिश्चित
काठमाण्डौ । प्रूडेन्सियल इन्स्योरेन्सले आगामी असार १० गते विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक साधारणसभा अझै गर्न नसकेको कम्पनीले हकप्रद पारितका लागि विशेष साधारणसभा आह्वान गरेको हो । कम्पनीले संचालक समितिबाट गरिएको १० बराबर ६ को अनुपातमा हकप्रद सेयर निश्कासनको प्रस्ताव पारित गर्न विशेष साधारणसभा...
काठमाडौँ । प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्स कम्पनी पनि यस वर्ष नाफा आर्जन गर्ने वित्तीय संस्थाका सूचीमा दर्ता भएकोे छ । चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा कम्पनीले खुद नाफा १९ दशमलव ९४ प्रतिशतले वृद्धि भएको वित्तीय विवरण प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीले आइतबार जारी गरेको विवरणमा गत वर्ष ८ करोड ५ लाख १० करोड १५ लाखमात्र खुद नाफा आर्जन भएको...